Amin’ny batisa dia manao fanekena amin’ny olona Andriamanitra! – filazantsaramada
Amin’ny batisa dia manao fanekena amin’ny olona Andriamanitra!
Publié parfilazantsaramada	 février 8, 2013 Laisser un commentaire sur Amin’ny batisa dia manao fanekena amin’ny olona Andriamanitra!
« Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: izaho no tokony hataonao batisa, ka hianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny Izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy, dia niakatra avy teo amin’ny rano niaraka tamin’izay Izy; ary, indro, nisokatra taminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nankeo amboniny. Ary, injao! nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Ity no Zanako malalako Izay sitrako. » Matio 3:13-17
Eto amin’ity teksta ity dia hita tokoa ny fanetren-tenana nasehon’i Jesosy.
– Nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa: tsy nandao fotsiny ny fanjakany ny Tompontsika fa tao antranon’omby koa Izy no teraka. Asa izay mety ho karazana lalitra sy biby kely toa ny fiatra mety hanaikitra, ao ny hamandoana, ao ny fofona…izany no niainan’Ilay Zanak’Andriamanitra mba hahatanteraka ilay teny hoe: Amintsika Andriamanitra. Isika olombelona na dia vao zaza aza dia nandova ota, araka ny voalazan’ny Soratra Masina fa avy amin’ny iray no niavian’ny ota amin’ny rehetra ary avy amin’ny iray kosa no niavian’ny famonjena ho an’ny rehetra dia i Kristy. Ampidirina ao amin’ny fiainantsika, ao am-pontsika i Kristy ka manaiky hiosina amin’ny loto rehetra sy ny faharatsiana rehetra ao am-pontsika ao na dia maharikoriko Azy aza izany.
– Nanaiky natao batisa Izy. Ny tandindon’ny batisa ao amin’ny Testamenta taloha dia iray amin’izany ny nanavotan’Andriamanitra ny zanak’Isiraely tamin’ny fahavalony tamin’ny namakiany ny Ranomasina Mena ka nahazoan’izy ireo nandeha tamin’ny tany maina, ary niditra tao ny fahavalo dia natelin’ny rano. Jesosy Kristy koa dia nanaiky handeha amin’izany làlana izany ary nanaiky Izy ho faty mandritra ny hateloana ary natsangan’Andriamanitra tamin’ny andro fahatelo. Ny tandindon’ny batisa iray koa ao amin’ny Testamenta Taloha dia ny amin’i Noa valo mianaka izay rano koa no nanavotan’Andriamanitra azy sy ny ankohonany, dia ny sambofiara nentin’ny rano, ary ny rano nahafaty ny olona rehetra tsy nanaiky hiditra tamin’izany sambo izany. Na dia tsy nanota aza Ilay Zanak’Andriamanitra dia nanaiky ho faty, hitondra ny otantsika, ny Marina hamonjy ny tsy marina. Jaona no nanao batisa an’i Jesosy. Jaona mpanao batisa, ny asan’i Jaona raha eto dia mpanao batisa, olona mpanao batisa. Izy no nanao batisa an’i Jesosy. Raha ny tantara eto dia tsy nanaiky izy tamin’ny voalohany, fa nandresy lahatra azy Jesosy mba hanatanterahany izany. Nahafantatra tokoa an’i Jesosy ho Ilay Mesia mantsy i Jaona, hany ka natahotra izy ny hoe izy indray no hanao batisa Azy. Tandindona sahady ny amin’ny hahafetesan’i Jesosy hateloana izao fanekeny atao batisa izao. Ho faty Izy ny amin’ny ota izay fahavalon’Andriamanitra
nefa hitsangana kosa ho velona ho fandresena ny ota, ho fiainana sy famonjena.
– Izao faneken’i Kristy atao batisa izao dia mitarika ny olony hanaiky izany koa. Fanekena ny asan’Andriamanitra eo amin’ny fiainana ny fanekena hatao batisa ary toa fanekena ny hiaraka ho faty Aminy, ary tsy ny ho faty mandrakizay anefa fa ho faty telo andro ihany ka hiara-mitsanagana Aminy kosa. Ho faty ny amin’ ny ota, ary ho velona amin’ny Fanahy, ka ho fiainam-baovao, ho zanak’Andriamanitra miara mandova amin’i Kristy, tsy ho mpanompo intsony fa ho sakaizan’i Jesosy Kristy, ho rahalahany. Tsy zanaka hatrany amboalohany isika satria efa nandova ota, fa zanaka natsangana. Ny batisa dia tsy fanesorana ny loton’ny nofo fa ny fitadiavana fieritreretana tsara eo anatrehan’Andriamanitra, amin’ny nitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty.
Hanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina antsika ny Batisa.
– Ary, indro, nisokatra teo aminy ny lanitra, ary hitany ny Fanahin’Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nankeo amboniny.
Fanekena no ataon’Andriamanitra amin’ny olona ao amin’ny batisa.
– Atsangan’Andriamanitra ho zanany isika.
Inona ary no tokony ho raisintsika amin’izao teksta eto izao?
Ny fanekentsika hino sy handray ny Famonjena atolotr’Andriamanitra dia mitondra antsika amin’ny fiainan’olom-boavonjy tokoa, ka tena ho voavonjy isika raha maharitra amin’izany. Mila miaina ny maha zanak’Andriamanitra antsika isika. Mila miaina amin’ny fiainana voadio isika rehefa nodiovina.
Ho amintsika anie ny Tompo Jesosy!
Publié parfilazantsaramada février 8, 2013 Publié dansUncategorized
Aoka ny tenin’Andriamanitra hitombo ao anatintsika
Koa satria niaritra ny nofo Kristy, dia aoka mba ho fiadiana ho antsika koa izany